सिस्नो यसरी खानुहोस्, यसरी खाए धेरै रोग रोकथाम र निदान गर्छ, पढ्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it अहंकारके के हो ? यसलाई कसरि त्याग्ने ? अनि जीवनमा कसरि अगि बढ्ने ? जीवन उपयाेगी लेख
Up Next यस्ता बानीले गर्दा तपाइ भविष्यमा पछुताउनु पर्नेछ, जान्रुहाेस्
पालक पनिर मिठो परिकार हो । यस्तै यसमा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने कुरा पनि छन् । पालकमा पनि धेरै फाइदा हुने…